Rasaasa News – Faalo: Maamulka Jubaland Masuuliyad Baa ka Saaran Sugid Amaanka Kinsmaayo.
Faalo: Maamulka Jubaland Masuuliyad Baa ka Saaran Sugid Amaanka Kinsmaayo.
on June 8, 2013 12:20 am
June 8, 2013 – Waxaa cad oo aan qarsoodi ahayn in dawlada Muqdisho, ay dagaal kula jirto maamulka Jubaland iyo shacabka reer Jubaland, arinkaas oo loo baahan yahay in ay rumaystaan masuuliyiinta maamulka iyo shacabka reer Jubaland.
Waxaa dhab ah in dawlada maanta ka jirta Somaliya ayna ahayn dawlad Qaran, balse ay tahay dawlad uu leeyahay qabiil. Daliil gaaban waxaa u ah in kolka madaxwayne Xasan Culusow uu aaday safarada dibada kaxaysto beeshiisa. Muqdisho dawlada joogtaan waxaa hadheeyey kor ilaa hoos waa hal beel, oo ah beesha ay ka dagi wayday Somaliya.
Dawlada la leeyahay Somali baa loo dhisay waxaa ka maqan Somaliland, Punland oo ah maamulo ka awood badan dawlada Mudisho la,aantoodna aanay jiri karin dawlad Somaliyeed. Waxayna dareemeen in dawlada Xasan Culusow ayna ahayn mid wanaag u keeni karta dalka Somaliya.
Waxaa nasiib daro ah in dawlada Muqdisho ay doonayso in ay xoog ku muquuniso shacabka reer Jubalan, iyada oo isaga dhigaysa dawlad Somaliyeed. Arintaas waa in ay ka digtoonaadaan shacabka reer Jubaland iskuna tashadaan, iyaga oo iska fogaynaya dadka Muqdisho laga soo dirayo ee neceb wanaagooda.
Waxaan maqalaa masuuliyiinta maamulka Jubaland oo aad u ixtiraama dawlada kolka ay ideecadaha ka hadlayaan iyo dawlada oo si ixtiraam la,a ugala hadasha Ideecadaha. Masuuliyiinta maamulka oo si jileec ku jiro u barya dawlada Muqdisho iyaga oo leh waa dawladanadii way na diidan tahay waxaba way ku la,a yihiin.
“Nin dilkaaga raba maslaxad lagama doono.” Waxaa iswaydiin leh hadii ay xishoon wayday dawlada Muqdisho, in maamulka Jubaland uu xishood gabana danaha dadweynaha Jubooyinka maxaa dan ah oo ku jirta?
Xaalada Jubaland waxay maanta taagan tahay “waxaba dhawran maynee Allow dhagaxyo soo daadi.” Hadii inta goori goor tahay, ayna meel saarin cadowga magaalada la jooga xidhiidhkana u jarin dawlada iyo laqdabadeeda. Hadii ayna ogaan in Ciidamada AMISOM, ciida ayna lahayn nabad ku joogi karaan, iyaga oo ilaalinaya rabitaanka dadweynaha Jubaland.
Waxay ila tahay wixii hada ka dambeeya in xishood iyo wanaag wixii lagu waayey lagu heli karo xabada ay raadinayso dawlada Muqdisho. Dantuna ay ku jirto in la sugo amaanka dadka shacabka ah ee degan magaalada Kismayo.